रबि लामिछाने भए KBC नेपालमा पहिलो कोरडपति ?.. (हेर्नुहोस भिडियो) - Nepal Insider
Home/समाचार/रबि लामिछाने भए KBC नेपालमा पहिलो कोरडपति ?.. (हेर्नुहोस भिडियो)
रबि लामिछाने भए KBC नेपालमा पहिलो कोरडपति ?.. (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौ । विश्वकै प्रख्यात टेलिभिजन रियालिटि शो “who wants to be millionaire” को नेपाली भर्सन “को बन्छ करोडपति” ले सगौरव ४० औं इपिसोड प्रशारण गरिसकेको छ । एपिवान टेलिभिजनबाट हरेक शनिवार, आइतवार र सोमबार सांझ ८ः३० बजे प्रशारण भइरहेको कार्यक्रमले पुर्व मेचीदेखि पस्चिम महाकालीसम्म सबै परविारलाई टेलिभिजन सेट अगाडि बसाउन सफल भएको छ ।
दर्शकको अपार माया र साथ पाउँदा पाउँदै पनि केविसिको ४० औं इपिसोडसम्मको यात्रामा कुनै पनि प्रतियोगीले २५ लाखसम्म रकम जित्न जित्न सकेका छैनन् । तर अब आउने इपिसोडमा भने “को बन्छ करोडपति” कार्यक्रमले आफ्नो पहिलो सिजनमै बहुप्रतिक्षित करोडपति पाएको छ ।
उक्त इपिसोडको करोडपति को होला भनेर सबैको चासो भन्न पुगेको छ । तर धेरैले उक्त ब्यक्ति अरु नभएर रवि लामिछाने हुन सक्ने बताएका छन् । भिडियो प्रोमो हेरेपछि सबैले एक करोड रवि लामिछानेले नै जितेको हुनुपर्ने बताएका छन् । रवि लामिछाने राष्कोट अस्पताल निर्माण सहयोगार्थको लागि को बन्छ करोडपतिमा सहभागी भएका थिए । उक्त इपिसोड यो हप्ता प्रसारित हुने छ ।
विजयी भएको घोषणा सहितको भिडियो प्रोम्रो तल मुनि राखिएको छ तल हेर्नुहोस्
बल्छी र करुणाको वैवाहिक जीवन दोस्रो बर्षमा ( बल्छीले लेखे मनछुने स्ट्याटस)
रविको रिहाईको माग गर्दै सडक अवरुद्ध गर्न खोज्ने पाँच जना प्रहरीको नियन्त्रणमा, यस्तो छ चितवनमा पछिल्लो अवस्था